Grass kalluun | Triploid Grass kalluun
Triploid Grass kalluun
All aad u baahan tahay Ogaato Grass kalluun The
Dhammaan maamulayaasha gudubno mas'uul ka yihiin xilsaaray waajibaadka maaraynta harooyinka iyo balliyada biyo duufaan hab waa labada kharash-ool ah oo faa'iido u macmiilka. Intaa waxaa dheer, maamulka harooyinka iyo balliyada biyaha daadka u baahan yahay inuu bay'adda u fiican si ay ula kulmaan caddaymaha bey'ada nidaamka. Si loo buuxiyo shuruudahan, waxaa lagama maarmaan ah si ay u hirgeliyaan xeelado kala weji duwan oo kala duwan loo adeegsado qalab waxtar u leh is samaysay shaqada. dheelitirka dabiiciga ah waxaa dhif ah heli isticmaalaya hal hab, oo aan dheeli jiraan natiijooyinka dhif wanaagsan.
control A noolaha loola jeedaa ka faa'iidaysiga hababka dabiiciga ah si loo gaaro ujeedada maamulka la doonayo in jirka oo biyo ah. kalluun cawska triploid waxaa inta badan loo isticmaalaa by milkiilayaasha gudubno, iyo maamuleyaasha si ay u caawiyaan in gacanta Dhirta biyaha aan la rabin. Waxa ay u muuqataa cajiib ah si ay u isticmaalaan kalluun sida nooc ka mid ah maareynta qashinka, laakiin rabitaanka wax boobaysa kalluun cawska ee dhirta sii kordhaya gudaha ama agagaarka gudubno, a waa mid waxtar leh in ay ka saarto waxyaabaha aan la rabin organic.
Si aad u leedahay iyo isticmaali noocan ah kalluunka, waxaa lagama maarmaan ah in la qabto ogolaansho ka hor inta iyaga u geliya in balli ama u gudubno,. Kalluunka waxaa nidaaminaya by the Department of Kaluumaysiga Game iyo Inland halkaas oo maareeyayaasha awoodaan in ay helaan ogolaanshaha ah. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay kalluun uu ku noqon karo nadiif ah si ay u hana ka badan ay soo saaraan iyo waxyeelo ay u gudubno ama balli by dhirta ka weyn-cunista.
Sida wakiilada deegaanka, maamulka gudubno u muuqdaan in ay ka fogaadaan hordhaca ah ee dhirta ama kalluun aan hooyo meesha maadaama ay tani ka murugoodo ah bey'ada nidaamka. Noocan ah kalluun, si kastaba ha ahaatee, waa heer sare faa'iido inkastoo aan hooyo si North America. Waxaa muhiim ah in ay si taxaddar leh loo isticmaalo sida aalad maamulka ah, haddii ay la doortay. Baahida loo qabo in nadiifin kalluunka marka ay weynaadaanba waa farsamo wanaagsan, laakiin waxaa jira tallaabooyin dheeraad ah u baahan in la tixgeliyo.
Mid ka mid ah tixgalinta koowaad waa in aan overstock gudubno ama balli la kalluun ah. qiyaastii 20%-30% caymiska ee dhirta wetland waxaa loo baahan yahay balli ah in la arko meel caafimaad iyo isku dheeli tiran. Haddii kalluun ah waxaa loo isticmaalaa si loo xakameeyo dhirta aan la rabin, waxaa lagu talinayaa in uu jiro stock ku filan si ay u cunaan tiro gaar ah oo dhirta maalin kasta, laakiin ma ku filan in la baabi'iyo dhammaan dhirta degganaa balli.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in qaab-dhismeedka baaritaan lagu rakibi hore ee qalabka dheecaanka wax cad in balli ama u gudubno,. Haddii balli bandhigaysaa leh qalab soo qaxeen ah, waxa uu oggolaan in kalluun si ay uga baxsadaan inta lagu guda jiro socodka biyaha culus. By rakibidda dhismeedka baaritaanka a, waxaa suurtagal ah si looga hortago in kalluunka ka dabaasha hoggaamineed webigu ku badbaado lacag.
Ugu dambeyntii, kalluun cawska horrayn waa shekeysan hoose iyo sida sida u janjeera in ay ku kici Texas on hoose balli. In balliyada gacmeed, ay taasi keento in qadar xad-dhaaf ah oo biyo wasakh ah. Ugu dambayntii, xataa haddii dhan dhirta aan la rabin baabba'aan, laga yaabaa inaad la balli wasakh ah guud ahaan iyo u baahan doonaa si uu u bedelo biyaha.
Control Aquatic Daaqsinka Iyadoo Triploid Grass kalluun